Baarasho: Falanqaynta Daabacaadda Mawduucyada Xaqa Loo Sameeyay | Martech Zone
Baarasho: Falanqaynta Daabacaadda Mawduucu Si Saxan Ayay U Sameeyeen
Jimcaha, Agoosto 19, 2016 Jimcaha, Agoosto 19, 2016 Douglas Karr
Haddii shirkaddaadu maalgelin ku sameyso horumarinta waxyaabaha, waxaad heli doontaa heer Analytics wax aan ka yareyn jahawareer. Halkan waxaa ku yaal dhowr sababood… qorayaasha, qaybaha, taariikhaha daabacaadda iyo calaamadeynta. Waxaa jira su'aalo gaar ah oo ay ku weydiiso shirkaddaada oo aadan si fudud uga jawaabi karin:
Waa maxay waxyaabaha aan daabacnay bishaan sidii ugu wanaagsaneyd?
Qoraa noocee ah ayaa kaxeeya taraafikada ugu badan bartayada?
Waa maxay astaamaha ugu caansan?
Waa kuwee qaybaha ka kooban waxyaabaha ugu caansan?
Fasax.ly lashaqeeyeyaasha daabacayaasha dijitaalka ah si ay u bixiyaan aragtiyo dhagaystayaal cad oo dareen leh Analytics madal. Kumaan kun oo qorayaal, tafatirayaal ah, maareeyayaasha goobta, iyo farsamayaqaanno ayaa horeyba u adeegsaday Fasax.ly si loo fahmo waxa ku jira bogagga booqdayaasha, iyo sababta. Dashboorka Parse.ly iyo API-yada ayaa macaamiisha ay u adeegsadaan inay ku dhisaan istiraatiijiyado dijitaal ah oo guuleysta kuwaas oo u oggolaanaya inay koraan oo ay la shaqeeyaan dhagaystayaal daacad ah.
Parse.ly waxay u kala jabisaa waxqabadka maaddadaada dashboodyo si fudud loo dheefsan karo, oo ay ku jiraan dulmar guud, waxqabadka qoraaga, qalab, aragtiyo taariikhi ah, waxqabadka boostada, waxqabadka qeybta, iyo tixraacyada. Waxaad sidoo kale abuuri kartaa oo aad diri kartaa warbixinno.
Tilmaamaha Parse.ly waxaa ka mid ah:
Dashboodyada Tusmada - Parse.ly ee dashboodyada waqtiga dhabta ah ee cajiibka ah ayaa hadda ay ku kalsoon yihiin shaqaalaha in ka badan 700 oo ka mid ah boggaga taraafikada ugu badan, oo ay ku jiraan TechCrunch iyo The Intercept. Waxay taageertaa dilal badan oo cabir ah oo ka baxsan sanduuqa, sida aragtida, booqdayaasha, waqtiga, iyo saamiyada.
API - Parse.ly's API wuxuu soo koobayaa macluumaadka ku saabsan taraafikada iyo waxyaabaha loogu talagalay ujeeddooyinka ah in si dhakhso leh loo bixiyo hab lagu bixiyo iskuxirka waxyaabaha ku jira goobta; shaashadda taraafikada ee dhoofinta xogta degdegga ah; ama iskudhafka fudud ee xogta taraafikada Parse.ly oo wata nidaamyada maareynta waxyaabaha jira. Waa qalab is-dhexgal ah oo si dhakhso leh loogu buuxiyo baraha hadda jira, barnaamijyada, iyo warbixinnada leh xogta Parse.ly - oo ay ku jiraan xogteena taraafikada ee waqtiga-dhabta ah.
Dhuumaha Xogta - Dhuumaha Macluumaadka ee Parse.ly ayaa ah API-ka ugu dambeeya, oo keenaya xogta ceyriinka ah ee ku saabsan boggagaaga, barnaamijyadaada, iyo adeegsadayaashaada, iyadoo buuq yar iyo dabacsanaan ugu badnaan. Waa hab hodan ah oo lagu furo 100% xogta ka dambeysa Parse.ly's Analytics, kuna falanqee baahiyaha ururkaaga. Waa mid guud, waxayna taageeri kartaa dhacdooyinka caadada u ah nooc kasta. Miyaad xiiseyneysaa inaad cabirto qotoda dheer, falalka wadaag ee goobta, qasabno talo bixinno tusmo ah, dareemo xayeysiis la arki karo, ama diiwaangelin wargeysyo ah? Mid kasta oo ka mid ah kuwan waxaa loo ekeysiin karaa inuu yahay dhacdo ceyriin ah, oo loo diro Parse.ly, laguna geeyo Dhuumaha Xogta.
Guudmarka Screenshot Parse.ly
Muuqaal Taariikheed Muuji Qoraalada Parse.ly
Qalabka Baarista Parse.ly
Qoraallada Shaashada Parse.ly
Warbixinnada Shaashada Parse.ly
Qorayaasha Baaritaanka Parse.ly
Tixraaca Baarista Falanqaynta Parse.ly
Tags: qiyaaso dhagaystayaashafalanqaynta waxyaabaha ku jiraaragtida mawduucacabirrada ka koobancabbiraadaha waxqabadkasifey.lydhif ahqorayaasha raadraacaraadinta taariikhda daabacaaddaqaybaha raadraacaraadinta tags
4-ta P ee Mashiinka Raadinta Casriga ah
Sida loo xisaabiyo Qiimaha Nolosha ee Isticmaalaha Mobiilkaaga